MIYUU SUURTAGAL NOQON KARAA IN UU DIB U SOO CELIYO GEEDKA YURUBTA LEH IYO GOORMA AYAY U FIICANTAHAY IN LA SAMEEYO, INTA LAGU GUDA JIRO DUKAAMADA AMA KA DIB IIBKA, IYO SIDA LOO DARYEELO? - SOOSAARKA DALAGGA
Geranium ubaxa: waa suurtogal in la soo celiyo iyo sida loo daryeelo dhirta ka dib qaabsocodka?
Geranium waa wax aan qabyo ahayn oo aan ubax lahayn. Oo iyana waxay u dulqaadanayaan beerista si fiican, laakiin, sida dhirta badankeeda, waa wax walwal leh.
Inta lagu jiro ubax, xaaladdu way sii xumaaneysaa, waxay noqoneysaa mid aad u adag in lala qabsado isbedelka. Indeed, inta lagu jiro muddadaa dhirta u baahan tahay xoog badan si ay u sameeyaan oo u quudiyaan ubaxyada. Qalabaynta inta lagu jiro ubax waa in la sameeyaa oo kaliya xaaladaha adag.
Ka hor inta ubax, warshad kasta waxay ku ururisaa xoogga si ay u fuliyaan habkan.. Muddadan, geranium waxaa lagu kaydiyaa nafaqooyinka waxayna xoojisaa nidaamka asaasiga ah.
Ubaxa waa marxaladda muhiimka ah ee taranta. Muddada dheer ee geedi-socodku socdo, awoodda badan ee geedku u baahan yahay. Wakiilada qaarkood waxay ku qaataan tamar aad u badan oo ay u dhintaan kadib markii ubax.
Wakhtiga ubaxyada oo dhan waxaa loo qaybin karaa dhowr marxaladood. Marxaladda koowaad, gaysashada ayaa dhacaysa. Iyaga oo kaliya ayaa lagu sameeyaa xubnaha taranka ee geraniums. Marxaladda labaad waxay u egtahay ubax. Marxaladda saddexaad, pollination iyo samaynta miro leh abuur. Muujinta jilicsan waxaa loo tixgelin karaa ubaxyo badan oo idil. Xilliga jiilaalka, dhirta waa nasasho.
Miyaan bedeleyn karaa xilliga ubaxa?
Waxaad dib u celin kartaa geraniums wakhti kasta oo sanadka ah.. Laakiin waxaa habboon in la tixgeliyo qaar ka mid ah astaamaha qalliinka:
Inta lagu jiro muddada ubax firfircoon, sida kor ku xusan, dhirtu waxay ku bixisaa dadaal badan oo ku saabsan sameynta ubax.
Wakhtigan waxaa jira socodka dheecaan firfircoon. Sidaa daraadeed, muddadan walaacsan, xubinta taranka ah ee Geranium wuxuu keeni karaa waqti dheer soo kabashada iyo dhirta ubaxyada.
Miyuu suurtagal ah iibsashada ka dib?
Laguma talin in dib loo soo celiyo geranium isla markiiba ka iibsashada.. Waa lagama maarmaan u ah dhirta si ay u bixiso nasasho dhamaystiran. Waxay qaadataa waxoogaa wakhti badan oo jimicsi ah si ay ula qabsato xaaladaha cusub. Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh ula socoto heerkulka iyo qoyaanka hawada ee qolka, hubi inaad waraabin joogto ah isku day inaadan walwal ku abuurin dhirta muddo ah.
Xaaladaha intooda badan, haddii xaaladahan aan la fiirin, ubaxyada dhowaan lagu soo iibsaday dukaanka ayaa u dhiman kara isla markiiba dhammaadka ubaxa. Ka dib markii dhan, ka hor inta aanu soo muuqan guriga, geranium ayaa helay dareen badan. Kani waa bedelka xannaanadda, gaadiidka, ku dhex yaal dhibco dhexdhexaad ah habka uu u socdo, hoyga dukaanka.
Goorma ayaa looga baahan yahay haddii uu geedka blooms?
Waxaa jira dhowr sababood oo loogu talagalay transplanting geedka ubax:
In dheriga waxaa jira ficilka lahayn ciidda ka tagay koritaanka xididada. Xalku wuxuu noqonayaa mid caadi ah.
Warshadu waxay ku fatahay biyaha. Maxaa khatar gelin kara nolosha geraniums.
Ubaxa wuxuu si hoose u koraa, wuxuu u muuqdaa daciif, inkastoo ubax, uu leeyahay caleemo yaryar.
Geranium ayaa xanuunsatay. Dhulka cayayaanka ah.
Waa muhiim! Dhar cusub oo loogu talagalay transplanting waa in la doorto kaliya laba mitir oo kabadan oo ka badan dherigii hore. Geranium wuxuu bilaabi doonaa inuu Bloom kaliya ka dib markii nidaamka xididka buuxiyaa booska oo dhan.
Sidee loo bedelaa?
Qalabka bedelka waa mid sahlan.:
Waa lagama maarmaan in aad haysato warshad wanaagsan ka hor qaliinka. Waa suurad wacan in ay ku jirto dhul qoyan dhowr saacadood. Waa suurtagal in la daadiyo fiidkii, iyo subaxdii si aad u bilawdo beerka.
Waxaa lagama maarmaan ah in jeermiska diirimaadka lagu beddelo. Waa wax ku filan xal karinta koloriin-ku jirta.
Dheriga ayaa ka wanaagsan in la doorto godadka dheecaanka. Haddii kale, markaa godadka waa inay iska jaraan.
Qeybta hoose ee dheriga si aad u soo saarto dheecaan. Waxaad isticmaali kartaa vermiculite, xumbo, qashinka lebiska, jajabyada dhoobada dhoobada iyo wax kale. Lakabyada dheecaanku waa inay ahaadaan 3 cm sare.
Geranium waa in si taxadar leh looga saaraa dheriga. Waxaa suurtogal ah in la yareeyo dhul yar oo ku yaal dhererka dheriga oo leh spatula ama qaaddo sidaas darteed buro boodh ah ayaa ka baxsan kara. Waxaa lagugula talinayaa inaadan tuurin asliga ah.
Si taxaddar leh u fiiri nidaamka asaasiga ah ee ubaxa ama waxyeellada. Marka la ogaado xididada aan caafimaadka lahayn, hubi inaad iyaga jarjartey ama mindi fiiqan.
Geranium dhejin cusub, ku dar qaddarka maqan ee ka maqan.
Isku daridda ciidda waa in si habboon loogu xushaa. Guryaha dukaanka ku habboon ee loogu talagalay begonias. Ama carrada ayaa diyaarin kara adiga. Si arrintan loo sameeyo, isku dar 1 qayb oo ciid ah, 2 qaybood oo ah humus iyo 2 qaybood oo ah sod.
Isku dar ah ciidda, adiga oo diyaarsan, waa in la nadiifiyaa. Waxaad ku daadin kartaa xalka kaneecada ama lagu dubo foorno ilaa 30 daqiiqo.
Biyaha waraabinta iyo meel meel gudcur ah ku taal dhawr maalmood.
Qiyaastii hal usbuuc ka dib, waxaad geli kartaa meel ku meel gaar ah.
Dharka ugu horeeya waa suurad wacan in la soo bandhigo 2 toddobaad kadib marka la isu tallaalayo.
Geranium uma dulqaadanayo qorshe, sidaas darteed waa in laga fogaadaa naqshadeynta. Laguma talin in dhirta lagu shubo kolla daaqad qabow.
Carrabku waa in uusan qalajin oo ka buuxin. Waxyaabaha saxda ah ee biyaha loo maro digsiga. Biyaha waa in ay ahaato heerkulka qolka si aysan xididada u kala-sooci karin.
Heerkulka qolka caadiga ah ee 18 ilaa 25 darajo ayaa sameyn doona. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato dhibcaha heerkulka.
Ha ku dhejin dheriga geedka geraniums qol qallalan ama meel u dhow radiator.
Haddii wax qaldamaan
Waxaa suurtogal ah in ka dib markii beerista dhirta ay bilaabi doonto in ay ku engegto, caleemaha ayaa bilaabi doona inay dhacaan. Kuwani waa dhammaan cilladaha walaaca. Waxaan u baahannahay inaan dulqaadanno oo aan sugno waxoogaa yar, xitaa wax badan ayaa laga yaabaa in eranium uu ku yimaado dareenkiisa iyo dib u hantidiisa. Haddii dhirta ay sii xumaato, waa ay daalaan oo dhimataa, markaa waxaa jiri kara suurtogalnimo sare ee caabuqa cayayaanka iyo cudurrada.
Qalitaanka Geranium ma aha shaqo adag., xitaa beerta ugu khatarsan ee ka shaqeyn kartid. Waxaa habboon in la daryeelo daryeel dheeraad ah si ay uga caawiso dhirta inay la qabsato diiqad weyn.